बोवाङ हत्याकाण्डमा कपाले, मसाने र तमे बिक पक्राउ ! कालिका भगवती मन्दिरको प्रतिक्षालयमा मृत भेट्टिएका व्यक्तिको सनाखन हुन सकेन ! – ebaglung.com
बोवाङ हत्याकाण्डमा कपाले, मसाने र तमे बिक पक्राउ ! कालिका भगवती मन्दिरको प्रतिक्षालयमा मृत भेट्टिएका व्यक्तिको सनाखन हुन सकेन !
२०७६ श्रावण २९, बुधबार १४:५७	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
रामप्रसाद घिमिरे, बागलुङ २०७६ साउन २९ । कालिका भगवती मन्दिरको जंगल भित्र रहेको प्रतिक्षालयमा मृत फेला परेका व्यक्तिको हाल सम्म सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले बताएको छ । तीन चार दिन निजको शव धौलागिरी अस्पतालको शवगृहमा राखिएको र शव कुहेर दुर्गन्धित बने पछी पोष्टमार्टम गरी बागलुङ नगरपालिकालाई जिम्मा लगाई शवको व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक झविन्द्र भट्टराईले ईबागलुङलाई बताए । धौलागिरी अस्पतालले पोष्टमार्टमको रिपोर्ट अझै नदिएको प्रहरीको भनाई छ ।
मृतकको अनुहारमा विभिन्न निलडाम रहेका छन् (तस्वीर) । शरीरमा अन्तवस्त्र र भेष्टमात्र रहेको अवस्थामा निजको मृत शरीर उत्तानो परेको अवस्थामा फेला परेको थियो । शव नजिक रहेका कपडा हेर्दा कुनै सभ्रान्त परिवारको जस्तो देखिने मृतकको खोजीमा हाल सम्म कोहि नआएको प्रहरी बताउछ । निजलाई कसैले कर्तव्य गरी मारेर शवलाई प्रतिक्षालयमा राखेर गएको भन्न सकिने अवस्था समेत रहेको छ ।
बागलुङ बजार आसपासका व्यक्ति भए निजका आफन्तहरु सम्पर्कमा आउने पर्ने हो तर हाल सम्म कोहि नआएकाले मृतक बागलुङ जिल्ला बाहिरको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
गत साउन २६ गते विहान आफ्नै घर अगाडीको मकै बारीमा नृशंस हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेका बोवाङ ८ का भन बहादुर बिक र घर भित्र रक्ताम्मे अवस्थामा मृत फेला परेकी निजकी श्रीमती विमा बिकको हत्या अभियोगमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेर लगेको ढोरपाटन नगरपालिका ८ बोबाङका अध्यक्ष नन्दे सुनारले ईबागलुङलाई बताए ।
ढोरपाटन-८ बोबाङमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी बृद्ध दम्पत्तिको नृशंस हत्या !
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाहरुमा मसाने विक मृतकका सहोदर भाई हुन भने अन्य दुई जनामध्य तमे बिक मसानेका सहोदर जेठान र कपाले साला भएको पनि अध्यक्ष सुनारले बताए ।
पारिवारिक रन्जिसका कारण भन बहादुर दम्पत्तिको नृशंसा हत्या गरिएको श्रोतको दाबी छ । मृतकका भाई मसानेले आफ्ना जेठान र सालाको सहयोगमा दाई भाउजूको नृशंस हत्या गरेको आशंका स्थानीयवासीको छ । मृतकहरुको शिरमा बन्चरोले प्रहार गरिएको, हत्यालाई अन्जाम दिएको घटनास्थलको अवस्थाले देखिएको पनि स्थानीयको बुझाई रहेको छ ।
दुई श्रीमतीका श्रीमान भानबहादुरकी जेठी श्रीमती र छोरा ढोरपाटनमा रहेको अवस्थामा भानबहादुर र उनकी कान्छी श्रीमतीको हत्या भएको श्रोतले बतायो । कान्छी श्रीमतीबाट जन्मिएको छोरा भारत तिर गएको उतै बेपत्ता भएको पनि स्थानीयको भनाई छ । घरभित्र अभियुक्तहरुले बन्चरो प्रहार गर्न थालेपछी ज्यान जोगाउन मकैबारी तिर भाग्दै गरेको अवस्थामा भानबहादुरको हत्या गरिएको हुन सक्ने घटनास्थलको प्रकृतिले देखाएको छ ।
उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक झविन्द्र भट्टराईले प्रहरी हत्याराहरुको नजिक पुगेको बताएका छन् । हत्याको कारण पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने उनले बताए ।
जापानमा तीज कार्यक्रम हुॅदै संकलित रकम सामाजिक कार्यमा !